Nikomy tsy satry ny FIGN?
2010-05-19 @ 22:33 in Politika
24 ora taty aoriana dia nalaza amin'izay ny zava-nitranga. Endrika fikomiana no fijeriko ataon'ny Toby zandarin'ny FIGN izay miantso ny vahoaka hankeny amin'ny Mausolée ny alakamisy 20 mey 2010 manomboka amin'ny valo ora maraina. Asa izay ho fandehan'ny raharaha mandra-pahatongan'izany fotoana fanombohana izany fa dia nisy zava-nitranga tokoa izany tamin'ity herinandro ity. Soa ihany fa nanoratra ny tena omaly.
Etsy ankilan'izany dia niantso ny olony ho eny amin'ny FJKM Ambohimanandray Ambohimanarina ny HMF. Ity toe-javatra tahaka ny tsy nampoizina ity ve no zava-miafina tao ambadik'ilay fahasahiana nananan-dry zareo? Tsy mpahandro hahalala loatra ny ati-vilany aho. Ny nahavariana ahy dia efa tsinjoko ihany fa tsy maintsy hiainga eny Ambohimanarina ity hetsika lazaina fa tsy ampoizina ity ary noheveriko ho ilay kianja malaladalaka ihany ananan'ny FJKM ao amin'ity Firaisana na Boriborintany ity ihany no hampiasaina nefa rehefa nanao fanambarana ny tao amin'ny FIGN dia mety hisy fiodinan'ny tantara tsy fantatra ihany ao. Tena misitery tanteraka noho izany ity teti-panorona politika iray ity.
Misy zava-mahavariana ihany eto. Tena miasa ny stratejia aloha, dia mampiasa olona maro antsoina hoe mpitolona ihany koa mba hanaovana ny hetsika ho tahaka ny endri-bahoaka. Na ny tamin'ny herintaona na ity mety hitranga ity dia misimisy itovizana ihany. Ny fahasamihafany? Efa saiky levona ny hetsika sivily (heveriko hoe nahery setra noho ny fandrobana nisy isaky ny vita ny fihaonana) no nandimby ny tolona ireo mpanao fanamiana sy mitam-basy. Eto kosa dia andro iray ny hanombohan'ny hetsika avy amin'ny HMF amin'ny andro andavanandro miainga avy eny Andrefan'Antananarivo sy ny fiantsoan'ny toby zandarin'ny FIGN mitoby eny Fort Duchesne izay miorina eny atsinanan'Antananarivo renivohitra. Raha jerena amin'izay dia heveriko fa samy tsy hijanona eo amin'ny toeram-pamoriana ireo fiantsoana olona amin'ity andron'ny 13+7 mey 2010 ity.
Toy ny hetsika misy hery mitam-basy manohana indray izany ity mety hitranga ity. Mahalasa an'eritreritra raha todihina izay nitranga tany Thailand. Nanao hetsika politika ny Menalamba, tamin'ny voalohany dia hetsika milamina no nataondry zareo. Avy eo nihamafy ny tolona ka nanjary nanao sakana (Barricade 1848?) ry zareo. Voatery nifanehatra tamin'ny fitaovam-piadiana mahery vaikan'ny miaramila ka rava ihany na dia teo aza ny fitozoana. Tsy nanana vondro-tafika nanohana ka dia nitolo-batana ny maro tamin'ny mpitarika. Inona no tsikaritra? Nampiasa basy nitifirana sy fiara mifono vy mihitsy ny tafika handravana ilay tolona politika. Tsy naheno fanamelohana avy amin'ny firenen-kafa loatra anefa aho ka nampisy adihevitra. Hevitro manokana, satria nampiasa izay fitaovana teo ampela-tanany ny fitondrana hampandriana ny tany dia tsy niteny loatra ny firenen-kafa. Raha nisy anefa ny nanongam-panjakana tamin-kery tany dia mety ho nisy izay fanamelohana izany nefa hitsaha-ketrika raha vao nambara sy notontosaina ny fifidianana. Izay hatreto no tsy nahazoan'ny fitondrana nijoro teto herintaona mahery izay fankatoavana iraisam-pirenena mihitsy...
Fa aiza no tiako hahatongavana? Satria misy hery mitam-basy anankiroa mety hifanehitra ao dia tsy maintsy misy ny iray hihemotra. Izay aloha no nisy teto Madagasikara. Mety tsy hiditra an-tsehatra mivantana hanala izay mpanao fihetsiketsehana noho izany izay irahina handrava ny fihetsiketsehana. Efa nampitandrina ny tsy hihemotra manko ny eny amin'ny FIGN na dia mety ho tonga hatramin'ny sanatriavina aza... Saingy vinavina daholo ihany izany fa fampiomanana ny rehetra fotsiny ny soratro.
Fanamarihana resaka hafa mihitsy: Asa ianareo izay nahita ity lahatsoratra ato ity fa misy zavatra tsy mazava ihany ao. Nahoana no lazaina ho tamin'ny 27 avrily no nivoaka ary amin'ny 26 mey ny farany fandraisana anjara nefa dia ny 19 mey vao hitako izy io? Ary ny mahavariana dia 19 mey ihany koa vao misy namela hafatra? Moa ve tsy efa fantatra mialoha izay tian-dry zareo halefa hijery lalao any Afrika Atsimo? Am-bava homana am-po mieritreritra. Variana be aho fa tsy mahita ny fametrahan-kevitra. Raha toa moa tsy hitanareo intsony ilay lahatsoratra ao amin'ny rohy dia mety ho efa noesoriny izay na nafindrany toerana.
Jentilisa 20 mey 2010, Antananarivo 00:32